Dingana lehibe manan-danja: Qatar Airways mandray ny fiaramanidina 250th
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Dingana lehibe manan-danja: Qatar Airways mandray ny fiaramanidina 250th
Qatar Airways androany dia nankalaza ny fahatongavan'ireo fiaramanidina faha-250, Airbus A350-900 avy any Toulouse, France, ny fanampin-tsakafo farany an'ny vondrona mpandeha, Cargo ary fiaramanidina mpanatanteraka.
Ity mari-pamantarana mahavariana ity dia tonga 22 taona monja taorian'ny nanombohan'ny mpitatitra, ary manaporofo ny fitomboan'ny zotram-piaramanidina izay nanjary nalaza manerantany tamin'izany fotoana izany, nahazo loka marobe, anisan'izany ny Skytrax World Airline of the Year accolade no tsy latsaky ny inefatra.
Ilay A350-900 vaovao dia manatevin-daharana ny fiaramanidin'ny fiaramanidina ambony indrindra, izay latsaky ny dimy taona ny salanisan'ny fiaramanidina. Tamin'ny 20 martsa 2019, ny fiaramanidina Qatar Airways dia misy fiaramanidina mpandeha 203, fiaramanidina 25 ary jet 22 Executive Qatar.
Raha nilaza ny zava-bita, ny Lehiben'ny Executive Qatar Airways Group, ny Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: "Tena mirehareha aho fa nahatratra ity mari-pahaizana manan-tantara ity amin'ny fananana andian-tsambo izay miisa 250 ny fiaramanidina ankehitriny. Ny fanaterana ny Airbus A350-900 vaovao indrindra dia mariky ny fitomboana miavaka izay hitantsika tao anatin'izay roapolo taona lasa izay, ary amin'ny fanoloran-tenantsika ny hanidina irery ihany ilay fiaramanidina vaovao indrindra sy mandroso indrindra eto an-tany.
“Qatar Airways dia miroso amin'ny fanitarana haingana ny tambajotran-tserasera manerantany, fanatsarana ny fanolorana vokatra an-tsokosoko amin'ny sokajin-trano rehetra ary indrindra ny fitondrana ny fiaramanidina avo lenta indrindra eto an-tany satria tianay ny mpanjifanay hanana traikefa tsy hay hadinoina. rehefa manidina miaraka aminay izy ireo. Fotoana lehibe amin'ny fitomboanay io fotoana io, ary antenaiko ny hahita ny fiaramanidina hitombo bebe kokoa amin'ny taona ho avy. ”
Qatar Airways dia malaza amin'ny fiaramanidiny manankarena. Tamin'ny taon-dasa, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia lasa mpanjifa fandefasana eran-tany ny Airbus A350-1000, izay manamarika ny fahavononan'i Qatar Airways hitarika ny indostria amin'ny alàlan'ny fanaovana mpisava lalana sy mandresy ny haitao farany sy ny fanavaozana. Tamin'ny 2014, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia lasa mpanjifa fandefasana eran-tany ny Airbus A350-900, lasa kaompaniam-piaramanidina voalohany manerantany miasa ny fianakaviana rehetra ao amin'ny portfolio -n'ny airliner Airbus maoderina.
Tamin'ny volana Janoary 2015, nametraka ny fiaramanidina Airbus A350 XWB voalohany indrindra, Qatar Airways tamin'ny làlan'ny Frankfurt ary tamin'ny 2016, io no kaompaniam-piaramanidina voalohany nanidina ny fianakavian'ny fiaramanidina A350 nankany amin'ny kaontinanta telo.